Ọdịdị dị na njirimara ndị Google - na Nsogbu | Martech Zone
Ọdịdị dị na njirimara ndị Google - na Nsogbu ya
Tọzdee, Septemba 5, 2013 Tọzdee, Septemba 5, 2013 Douglas Karr
Ezigbo enyi Brett Evans wetara nsonaazụ ọchụchọ na-adọrọ mmasị. Mgbe ụfọdụ ndị folks na-achọ Douglas Karr, ihe gbara ya gburugburu sidebar jupụtara na ozi gbasara onye na-ese ihe nkiri (ọ bụghị m), kama ọ bụ foto m.
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na enweghị njikọ dị n'etiti data Wikipedia na profaịlụ Google+ m. E nweghị njikọ na ya Wikipedia na metụtara m, e nweghị njikọ na m Google+ profaịlụ na njikọ ya Wikipedia peeji nke… ya mere, olee otú Google+ kpebiri na ha bụ ndị otu ụzọ? (M nwere ibe Wikipedia, mana ha ehichapụ ya mgbe m mezigharịrị ụfọdụ ozi na-ezighi ezi.)
Onye nyocha SEO anyị malitere otu ihe banyere ya na otu SEO ya na Google+ na ọtụtụ kwuru otú Google nwere nnọọ otu nnukwu disambiguation algọridim… ma ọ ka dara ebe a. Enweghị m nchegbu banyere ya ruo mgbe JC Edwards welitere ajụjụ na-emenye ụjọ:
Ọ dabara nke ọma na ikpe a metụtara onye nduzi ihe nkiri, gịnị gaara eme ma ọ bụrụ na ọ bụ nwatakịrị na-emetọ ma ọ bụ na-egbu ọchụ ma ha gosipụta ụmụ okorobịa a?
Nke ahụ bụ echiche dị oke egwu! O yikwara ka ọ dị njọ na Google ga-ewere njirimara nke mmadụ ma ọ bụghị nyochaa ya ma ọ bụ jiri ya na mmadu. Ha na-eme nke a ma a bịa n’azụmahịa, ngwa ahịa na ụghalaahịa… ndị mmadụ agaghị enwe isi ka mkpa? Ahụrụ m nsogbu na mmiri!
Tags: onye edemedenkwuputadouglas karrnjirimara googlegoogle searchNsonaazụ ọchụchọ
banyere: Mgbasa mgbasa ozi na njikwa dị mfe
Mbido edemede na Yoast's WordPress SEO